Hiran State - News: Sargaal ka tirsan ururka Shabaab oo kashifay sir badan oo uu kaka hadlayey qaabkii ay Mogdisho ugu baxeen.
Sargaal ka tirsan ururka Shabaab oo kashifay sir badan oo uu kaka hadlayey qaabkii ay Mogdisho ugu baxeen.
Mogdisho;- masuuliyiin ka tirsan dowlada koofurta Somaliya ayaa garab ka tirsan Shabaab kula heshiiyey in ay caasimada ka baxaan inta laga gaarayo shirka wadatashiga ee ay iclaamineyso dhawaantan QM.
Kedib ka bixitaankii ururka Shabaab ee Mogdisho ayaa saraakiisha Shabaab qaarkood oo aad moodo iney cabsan yahiin siyaabo kala duwan uga hadlaya ,waxa keenay iney hal mar ka baxaan Mogdisho. mid ka mid ah saraakiisha Shabaab oo ku sugan Mogdisho kana mid ahaa dadkii iska bedelay dharka ee aan magaalada meelna uga baxin isagoo ku sugan xaafada Wardhiigley ayaa sheegay in uu heshiis hoose dhex maray qaar ka tirsan Shabaabka iyo shaqsiyaad ka mid ah masuuliyiinta koofurta Somaliya ee fadhigoodu yahay Mogdisho sida uu hadalka u dhigay.
Sargaalka ayaa ku nuux nuuxsaday in aysan Shabaab ka bixin Mogdisho laakinse ciidanka intooda badan ay ku sugan yahiin gudaha magaalada intiiba heshiiskan la gashay mid ka mid ah labada Shariif oo sida uu sheegay ka codsaday in ay xarakadu magaalada ka baxaan inta laga qabanayo shirka wadatashiga oo ay qaban qaabineyso QM.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa yiri Mogdisho waanu ku sugan nahay kamana tageyno ee waxaanu hakinay oo kaliya dagaaladii waaweynaa inta laga dhaqan galinayo heshiiskaan kumeel gaarka ah oo ay inta badan Saraakiisha Shabaab ee ka soo jeeda koofurta Somaliya qeyb ka yahiin.
Marka laga soo tago sargaalkani hadane waxaa xaqiiqa ah in ay waligood ay ka dhaxeysay wada shaqeyn masuuliyiinta koofurta Somaliya amaba dowlada Kampala qaarkood iyo saraakiisha Shabaab. sidoo kale Shabaab ayaa u muuqda koox uu qilaaf weyn u dhaxeeyo sida lagu helayo warbixino intooda badan ka imaanaya xarumaha telefonada Somaliya laga hago oo iyagu markasta kooxdii jabta sirtooda shacabka u soo bandhiga.
Ugu danbeyn waxuu muran badan ka jiraa halka ay ku danbeyn doonto mustaqbalka caasimada Somaliya ee Mogdisho mar hadii inta badan ciidankii Shabaab ay dharka iska bedeleen shacabkiina ku milmeen. waxey u badan tahay in magaalada gudaheeda lagu bartilmaameedsan doono wafuuda halkaasi iskugu imaan doono waaba hadii leysku raaco in Mogdisho la geeyo shirkaasi oo lagu kala aragti duwan yahay goobta uu ka dhacayo marka la gaaro xiliga ay qorsheyneyso QM. arinta iyaduna in la xuso u baahan waxey tahay Shabaabka aan heshiiskaan waxbo kala socon sow iyaguna dagaalo jogo ah kama sameynayaan Mogdisho si ay aduunyada u tusiyaan in aysan Mogdisho aheyn goob nabdoon madama ururku u muuqdo mid qaab qabiil u xuubsiibtay oo aysan sidii hore iskaka war qabin aysana jirin meel ay hada si toos ah ugu amar qaataan ciidamadii Shabaab ee ka baxay Mogdisho iyo kuwa ku haray.
· admin on August 07 2011 19:58:12 · 0 Comments · 1908 Reads ·
14,600,147 unique visits